बार्सिलोनामा अब जर्सी नम्बर १० लगाउने आँट कसले गर्ला? - Dainik Online Dainik Online
बार्सिलोनामा अब जर्सी नम्बर १० लगाउने आँट कसले गर्ला?
प्रकाशित मिति : २८ श्रावण २०७८, बिहिबार १२ : १३
अर्जेन्टिनी स्टार लियोनल मेस्सी अब पेरिस सेन्ट जर्मेन पीएसजीको खेलाडी भइसकेका छन्। उनले त्यहाँ बुधबार आफ्नो लक्ष्य च्याम्पियन्स लिग जित्ने भएको बताइसकेका छन्।
बार्सामै बस्ने चाहना हुँदा र आधा तलब घटाउँदा पनि ला लिगाको नियमले उनलाई बार्सामै बसिरहन दिएन। घाटामा रहेको क्लब बार्सिलोनाले मेस्सीले घटाएको तलब दिन पनि असक्षम भएको ला लिगाको भनाइ थियो।
मेस्सीले एक दशकभन्दा बढी बार्सामा जर्सी नम्बर १० लगाए र इतिहास रचे। उनी बार्साका सर्वाधिक गोलकर्ता हुन्। उनले सोही जर्सी लगाएर ६ वटा बालुन डि’ओर जिते र सम्भवत यसपटक पनि उसैले बालुन डि’ओर जित्नेछन्।
कोपा डेल रे उपाधिसँगै ला लिगाको सर्वाधिक गोलकर्ता र देशका लागि कोपा अमेरिका जितेका उनी सो खेलको सर्वाधिक गोलकर्ता र उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका थिए। बालुन डि’ओर पावर र्यांकिङमा उनी नै अब्बल छन्। यो उपाधिको लागि व्यक्तिगत खेल प्रदर्शन नै हेर्ने गरिन्छ।
जे होस् बार्सिलोनमा अहिलेसम्म उत्कृष्ट खेलाडीले मात्र जर्सी नम्बर १० लगाएका छन्। यतिबेला मेस्सीले बार्सा छाडेपछि यो जर्सी नम्बर कसले पाउँछ भनेर सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। बास्केटबलमा जस्तो फुटबलमा जर्सी नम्बरलाई रिटायर्ड गर्न मिल्दैन।
यसअघि क्रिस्टियानो रोनाल्डोले रियल मड्रिड छाड्दा जर्सी नम्बर ७ मारियानो डियाजले पाएका थिए। तर उनले सो जर्सी नम्बर ७ को गरिमा राख्न सकेनन्। उनी मड्रिडमा चल्नै नसकेपछि त्यो जर्सी नम्बर अहिले इदेन ह्याजार्डले पाएका छन्।
तर उनको खेलबाट पनि मड्रिडका समर्थक त्यति सन्तुष्ट छैनन्। यद्यपी बेलाबेला उनले गोल भने गर्ने गरेका छन्। यसबीचमा अब मेस्सीको जर्सी नम्बर १० लगाउन कसले आँट गर्ला भनेर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ।
मेस्सीले बार्सा छाड्ने बेला आफू पुनः बार्सामै फर्किने र बार्सिलोना आफ्नो घर भएको बताएका थिए। उनले पीएसजीमा दुई सिजनको सम्झौता गरेका छन्। मेस्सी दुई वर्षपछि बार्सामै फर्किने अनुमान पनि गरिएको छ। अहिलेसम्म बार्सामा १० नम्बरको जर्सी कसैलाई दिएको छैन। मेस्सीको पर्खाईमा बार्साले त्यो जर्सी दुई वर्ष कसैलाई नदिने पनि विश्लेषण गरिन्छ।
यद्यपी कोही स्टार खेलाडीलाई बार्साले सो जर्सी नम्बर दिनपनि सक्ने बताइन्छ। मेस्सीको गरिमा राख्ने खेलाडीले सो जर्सी नम्बर लागउन सुहाउँछ पनि।
हालसम्म बार्सामा जर्सी नम्बर १० लगाउने खेलाडीको सूची
– एन्जल क्युलरले सन् १९९५ देखि १९९६ सम्म जर्सी नम्बर १० लगाएका थिए, जियोभानीले सन् १९९६ देखि १९९७ सम्म, जारी लिटमेनन सन् १९९९ देखि २००० सम्म, रिभाल्डो सन् २००० देखि २००२ सम्म, हुवा रोमन रिकेलमी सन् २००२ देखि २००३ सम्म, रोनाल्डिन्हो सन् २००३ देखि २००८ सम्म, मेस्सी सन् २००८ देखि २०२१ सम्म (मार्का र एजेन्सीको सहयोगमा)
माधव नेपालको चुनौतीः केपी ओलीलाई धुलो चटाएर छाड्छौं